musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Hei! Kafe Inobudirira muIndia
Pakati pedenda raparadza indasitiri yezvitengesi uye zvakakonzera kuvharwa kwemhando dzakawanda dzezvitoro, Hei! Kafe yakabuda ichibudirira. Iyo Indonesia-based digitally-native drink upstart yakabudirira kuvhura zvitoro makumi matanhatu muIndonesia kubva payakavambwa muna Chikumi 60 uye inotarisirwa kuwedzera kusvika kuzvitoro mazana matatu mukupera kwa2020.
Hey! Kafe ndiye uropi hwaEdward Djaja, makumi maviri nematanhatu, muvambi weSeven Retail, iyo inogara akati wandei ari kuuya ezvitoro akadai seGolden Lamian, Indonesia inotungamira Chinese Fast-Casual Chain ine zvitoro zvinopfuura makumi manomwe muIndonesia kubvira payakavambwa muna 26.
“Muno Heyi! Kafe, yedu yekumaodzanyemba nyeredzi metric yakafanana-chitoro chekutengesa kukura, izvo zvinoita kuti mhando iwane stellar unit economics. Tinodadisa kutaura kuti hurongwa hwedu hwakaita kuti pave nenguva yekudzosera mari yemwedzi iri pasi pegumi nemiviri, chinova chinhu chakakosha kwatiri kuti tikwire nekukasira nenzira yakadzikama mumakore anotevera,” akadaro Edward.
Laser inotarisa pakugadzirwa kwechigadzirwa uye kugutsikana kwevatengi
Kuti uwane iyi nyeredzi yekuchamhembe metric, Hei! Kafe inoramba ichiisa mari mukumaka uye kuvandudza chigadzirwa. Nekushandisa iterative uye yesainzi yekuvandudza chigadzirwa maitiro, Hei! Kafe inokwanisa kuyedza anopfuura makumi maviri echigadzirwa pfungwa mwedzi wega wega. Izvi zvakakonzera kuurayiwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana uye zvinotengeswa zvakanyanya, zvakadai seHey-Shake Series!, iyo inosanganisira Strawberry Heaven Hey-Shake uye Choco-Cashew Hey-Shake, pakati pevamwe.
Iine yakasarudzika dhizaini uye chinzvimbo, Hei! Kafe iri kunyatso kunanga vadiki uye hudyu millennials - huwandu hwevanhu nezera muIndonesia - semusika mukuru. Kupa huwandu hwakasiyana hwezvinwiwa nemutengo unokwanisika, Hei! Kafe inonyanya kufarirwa pakati pemireniyumu, ine anopfuura zviuru gumi nemaviri makapu ezvinwiwa anotengeswa zuva rega rega.
Asset-light modhi inotsigirwa nehunyanzvi
Kukurumidzira kuwedzera kweiyo brand kunotsigirwa neasset-light modhi. Zvizhinji zvezvitsuwa zvemhando yacho zvinosanganisira matumba emakompakiti anoderedza mari yekushandisa uye kufambisa basa rekutakura Grab & Go. Inosvika makumi manomwe muzana ekutengesa kwemhando kunosanganisira maodha ekutumira epamhepo. Iyo mhando inopawo yekudyidzana modhi, yakafanana neinofarirwa yekutungamira macheni ezvitoro muIndonesia.
Mabhizinesi ekambani iyi atora maziso evanodyara mari, vakaita seTrihill Capital, iyo yakatsigira kambani iyi muchikamu chembeu. Nekuchengetedza iyo asset-light modhi, kambani inotarisira kutarisa zviwanikwa pakuwedzera kukosha kweiyo brand uye nekuwedzera mari muhunyanzvi.
Zvirongwa zviri kuenderera mberi zvekuvhura nharembozha kutanga 2022, kuitira kuti vape vatengi vavo zviuru mazana matatu nemakumi mashanu epamwedzi neruzivo rwakanyanya uye rusina musono.